Inner epoxy kunze polyethylene anticorrosive simbi pombi rudzi rutsva rwesimbi epurasitiki composite pombi. Iyo inoumbwa nesimbi pombi substrate, epoxy resin yemukati coating uye polyethylene kunze coating.
Inner epoxy kunze polyethylene anticorrosive simbi pombi rudzi rutsva rwesimbi epurasitiki composite pombi. Iyo inoumbwa nesimbi pombi substrate, epoxy resin yemukati coating uye polyethylene kunze coating. Iyo ine yakanakisa mechanic properties, corrosion resistance uye kuchembera kuramba. Inoshandiswa zvakanyanya mukuchengetedza mvura, simba remagetsi, indasitiri yemakemikari, peturu uye mamwe akawanda maindasitiri.
Iyo yemukati epoxide yekunze polyethylene anticorrosive simbi pombi yakakamurwa kuita: yemukati fusion yakasungirirwa epoxy hupfu yekunze imwe-layer polyethylene anticorrosive simbi pombi, yemukati mvura epoxy upfu mukati-single-layer polyethylene anticorrosive simbi pombi, yemukati fusion yakasungirirwa epoxy hupfu hwekunze hutatu-layer polyethyle 3PE) anticorrosive simbi pombi, yemukati mvura epoxy (ipn8710) yekunze matatu-layer polyethylene anticorrosive simbi pombi.
Kuumbwa kwechimiro chemukati epoxide uye yekunze monolayer polyethylene
1. Simbi pombi base zvinhu: isina musono simbi pombi, yemagetsi welded simbi pombi (yakatwasuka weld, spiral weld)
Structural dhizaini yekunze single layer polyethylene
3. External anti-corrosion coating: inopisa inonyunguduka imwe-layer polyethylene poda coating
Inner epoxide kunze matatu-layer polyethylene (3PE) chimiro
3.External anti-corrosion coating: inopisa nyunguduka matatu-layer polyethylene coating. Iyo yepasi layer ndeye fusion yakasungirirwa epoxy resin poda, iyo yepakati inonamira inopisa-yakanyunguduka, uye yekunze layer ndeyepamusoro-density polyethylene.
Kuenzanisa kwemukati epoxide yekunze monolayer PE uye yemukati epoxide yekunze 3PE
Polyethylene uye epoxy zvine yakanakisa corrosion resistance, asi imwe neimwe ine zvayakanakira. Polyethylene ndeye thermoplastic zvinhu zvine yakanaka kuchinjika uye bump kuramba. Nekuda kweasiri-polar molecules, kuenderera kwekunamatira pakati pe polyethylene nesimbi pombi kwakashata; Epoxy resin ndeye polar molecule ine hydroxyl mapoka. Pane imwe tembiricha, zviri nyore kuita nemapombi esimbi uye ine kunamatira kwakasimba. Zvisinei, haidziviriri kudhumhana nekuti chinhu chethermosetting. Naizvozvo, musanganiswa wezvinhu zviviri izvi ndezvemusanganiswa wakanakisa muindasitiri yeanti-corrosion.
Indasitiri yepurasitiki yakavharidzirwa nesimbi yepombi yakagadziridzwa kubva pakutanga kwemukati nekunze kwepolyethylene kusvika mukati nekunze epoxy nekuda kwezvinetso zvekunamatira, asi epoxy layer yekunze haigoni kupikisa. Gare gare, yakagadziridzwa kusvika kuchizvarwa chechitatu chemukati epoxy yekunze polyethylene, asi dambudziko rekunamatira richiripo kana imwe-layer polyethylene inosanganiswa zvakananga nepombi yesimbi. Pakupedzisira, yakakwidziridzwa kusvika kuchizvarwa chechina anti-corrosion yemukati epoxy yekunze matatu-layer structural polyethylene.
Zvakapfuura: Anti corrosion uye thermal insulation simbi pombi mugadziri
Zvinotevera: Corrosion resistant high simba simbi pombi fekitari
China thermal insulation simbi pombi fekitari
Spot kutengesa kwepamusoro zingi yakavharwa nesimbi ...